Darpan Nepal – बुढेसकालमा यसकारण डिमेन्सिया अर्थात् बिर्सने रोग लाग्छ ? लक्षण र बच्ने उपाय..
बुढेसकालमा यसकारण डिमेन्सिया अर्थात् बिर्सने रोग लाग्छ ? लक्षण र बच्ने उपाय..
कुनै मानिसको उमेर ६० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र बिर्सने बानी पनि बढ्दै गएको छ भने उसलाई ‘डिमेन्सिया’ नामक मानसिक रोग लागेको हुनसक्छ ।
यो रोग लागेपछि सम्झने, आफन्तजनलाई चिन्ने, उनीहरुको नाम सम्झने, सरसफाई, नुहाइधुवाई तथा दिसा–पिसाव गर्ने जस्ता पहिले गर्दै आएका महत्वपूर्ण काम गर्ने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। यो रोग प्रायः ६० वर्ष उमेरपछि मात्र लाग्छ र जति उमेर वढ्दै गयो डिमेन्सिया हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ।
प्रायः ६५ देखि ७० वर्ष उमेरका मानिसमा डिमेन्सिया हुने सम्भावना करिब १ प्रतिशत हुन्छ भने ९०–९५ वर्षकालाई यो रोग हुने सम्भावना करिब १० प्रतिशत हुन्छ।
डिमेन्सिया रोग लागेपछि मानिसमा विभिन्न किसिमका लक्षण देखिन्छन्ः गर्दै आएको काम बिगार्दै जाने र पछि गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने। परिवारका सदस्यको नाम सम्झन पहिले कुनै कठिनाई नहुने गरेकोमा रोग लागेपछि बिर्सिरहने र सम्झाए पनि एकैछिनमा बिर्सिने। पैसा, गरगहना, साँचो वा कागजपत्रहरु राखेको ठाउँ प्रायः जसो बिर्सिने र घन्टौं खोजी गर्नुपर्ने। (तर कहिलेकाहीँ बिर्सने जोकोहीलाई पनि हुन सक्छ, यसलाई रोग मानिँदैन।)
समय तथा स्थानको ज्ञान हराउने। महिना, बार, गतेजस्ता कुराको सम्झना हराउने। आफू बस्दै आएको गाउँ, टोल, छिमेकको पनि सम्झना हराउँदै जाने। रोग बढ्दै गएपछि भर्खरै खाना खाएको पनि बिर्सने र मलाई खानै दिएनन् भनेर कराउने र बारम्बार खाना माग्ने। आफ्नै छोराछोरी, बुहारी नातिनातिनालाई नचिन्ने, हजुर, तपाईं भनेर सम्बोधन गर्ने। आफ्नै परिवारका सदस्यलाई पनि नचिनेको मान्छे आयो, चोर हो कि? सामान चोरी गर्छ कि भनेर डराउने र आफ्नो सामान लुकाउने। आदि।
रोगको निदान भनेकै बिरामीको सम्झना शक्ति ठिक छ कि छैन भनेर चिकित्सकले गर्ने परीक्षण हो। यसको निदान गर्दा अन्य कुनै रोगका कारण हो कि? भनेर खोजिनिती गर्नुका साथै रगत आदिको परीक्षण गर्ने गरिन्छ।
उपचार गरेर निको हुने अन्य कुनै रोगका कारण सम्झना शक्तिमा समस्या परेको रहेछ भने उपचारपछि निको हुन्छ। अन्य कारणले होइन, डिमेन्सिया भएर नै स्मरणशक्ति हराउँदै गएको हो भने यकिन भएपछि बिरामीको स्याहार–सुसारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे जानकारी लिन तथा व्यवहार गर्न परिवारलाई सजिलो हुन्छ।
व्यक्तिगत सरसफाई र खानपिन आदि साना बच्चाबच्चीलाई जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। दिउँसो सुत्न दिँदा राति ननिदाउने समस्या हुने भएकाले राति सुत्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ। खास गरेर सहरमा घरको ढोका, घर कम्पाउन्ड भए ढोका÷गेट राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ अन्यथा घर बाहिर गएमा बिरामी आफैं घर पर्किन सक्दैनन् र परिवारका सदस्यलाई बिरामी खोज्न सास्ती हुन सक्छ।
बिरामीको खल्तीमा घरको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर भएको कार्ड राखिदिएमा हराएमा पनि खोज्न सजिलो हुन्छ। नाम÷फोन नम्बर भएको ब्रासलेट (चाँदी वा अन्य धातुको) लगाइदिँदा पनि हुन्छ।
अन्य समस्याजस्तै आँखामा मोतीबिन्दु, सुन्ने समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि भए त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लडेर चोटपटक लाग्ने र विभिन्न संक्रमण भएर समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। निद्रा नलाग्ने, रिसाउने, तोडफोड गर्ने आदि समस्या भएमा केही औषिधको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनुपयुक्त व्यवहार (जस्तैः कपडा खोल्ने, नांगै हुने, यौनांग खेलाउने, रिसाउने, कुटपिट गर्ने वा तोडफोड गर्ने आदि) गर्ने समस्या भए मनोरोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर औषधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बिरामीहरु बिस्तारै आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। उनीहरुका परिवर्तनलाई रोग मानेर गर्न सक्ने रेखदेख गर्नु/गराउनु आवश्यक हुन्छ। यसलाई बोझका रुपमा लिइएन भने मानसिक तनाव पनि त्यति हुँदैन।
टाउकोमा जोडले चोटपटक लागेको छ भने पनि पछि गएर डिमेन्सिया हुने सम्भावना हुन्छ। टाउकोमा चोटपटक नलागोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, मानसिक तनावलाई सकेसम्म कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तनाव हुँदा ‘कर्टिसोल’ भन्ने हार्मोन शरीरमा बढी निस्कन्छ, जुन शरीर र मस्तिष्कका लागि हानिकारक छ।
तनावको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु भनेको आफ्ना समस्या मिल्ने साथी वा परिवारका सदस्यसँग भन्नु, समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नु, शारिरीक व्ययाम, ध्यान, आराम, निद्रा, पौष्टिक आहार, संगीत श्रवण आदि गतिविधि हुन्। यसबारे थप जानकारी विशेषज्ञबाट लिन सकिन्छ। भनिन्छ, मस्तिष्कलाई कि त प्रयोग गर वा गुमाउ। केही काम छैन भनेर चुप लागेर निराश भई बस्नुको बदला नयाँ–नयाँ विषयबारे पढ्ने, सिक्ने आदि गर्दा फाइदा हुन सक्छ।
अल्जाइमर्स रोग भएको मानिसमा ओमेगा–३ घटेको पाइन्छ। यो तत्व भटमासको तेल र माछाको तेलमा प्रशस्त पाइन्छ। शरीरमा यी तत्वको कमी हुन नदिँदा पनि केही हदसम्म रोगबाट बच्न सकिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्दा डिमेन्सिया लगायत धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ, त्यसैले यसबारे युवावस्थादेखि नै ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ।
स्रोत : स्वास्थ्यखबर पत्रिका
Previous Postयसरी सुरक्षित राख्नुस् आफ्नो मोबाइल Next Postफुरी शेर्पा संग खाएको कसम भुली सुष्मा किन प्रताप सँग टासिए जान्नको लागि(हेर्नुस् भिडियो)